Amathiphu kubazali emfundweni yezingane zasesikoleni esiphakeme
Kungenzeka ukuthi ukhulume ngokuqondile ukuthi bonke obaba nabomama abathandayo izingane zabo baphupha ukubabona bengajabuli kuphela, kodwa futhi baqaphela impilo yabantu abadala, okudingekayo emphakathini. Futhi-ke, ngokwengqondo, ngokomzimba nangokomoya. Lokhu kuvumelana, njengokwesiko ukusho manje. Futhi-ke, bonke abazali bafuna izindlela zokuthuthukisa ingane yabo ngokugcwele. Namuhla sizonikeza abazali abazali iseluleko ekukhulisweni kwezingane zokufunda esikoleni esiphakeme.
Ngokuvamile, ubuhlobo babazali nezingane zonyaka wesikole esiphakeme bukhula ngokulandela uhlelo olulandelayo: okokuqala ingane ayikho enye indlela yokuziphatha ngaphandle kwamalungu amadala omndeni, ngakho ufuna ukubalingisa, ukujabulisa uyise, umama, ugogo, umkhulu ... Okokuqala, bafunde izinkondlo nezingoma, izindabakwane. Ngenkathi ingane iya enkulisa, konke kubonakala sengathi kuhamba kahle.
Khona-ke isikole siqala, futhi ngenxa yalokho, ubunzima bokuqala: okokuqala ama-wmb ne-scribbles aziphumanga, kanti izinombolo azifaki, ngaphezulu-ngaphezulu ... Futhi manje abazali baqala ukuzwa ukuthi "ingane yabo" iyingane evamile kakhulu, futhi kunamakhono avamile futhi, ngendlela, akuyona into ephawulekayo kakhulu. Ubaba nomama baphenduka, noma ngisho ndawonye, ​​ukukhulisa ingane yabo "yokulwa nezingane," ngezinye izikhathi ukuchofoza induku ephula ubuhlobo obuseduze naye, obungase bulahleke ngokuhamba kwesikhathi.
Ekukhuleni, kuncane okungashintshwa. Futhi-ke wonke umuntu uyamangala: bathi, umndeni, kubonakala sengathi ulungile, kungani ukhula intsha "enzima"? Futhi-ke umuntu uyakhula, futhi asisakwazi ukumbona, ngakho-ke, okungaqondakali, okungaqondakaliyo uba ....
Kodwa konke lokhu kungagwenywa, uma abazali kuphela, ngenkathi ingane yabo isesimweni sezinhlayiya, akuthola kunzima ukumba umsebenti emibhalweni yabafundisi abavelele ababekade bexazulula inkinga yesikhathi esiphezulu, nabo bonke abanye mayelana nokuthuthukiswa okuphelele, okuhambisanayo nobuntu !! !!
Kodwa wena abazali abafanele. Ngaphezu kwalokho, uthole iseluleko esifanele kubazali abazokusiza ukuxazulula izinkinga mayelana nokuthuthukiswa kwengane yakho ngisho nangaphambi kokuba kwenzeke.
Ngakho , isihloko sokuqala :
- APPLY FOR THE DATA YONKE UMUNTU (NENGANE YAKHO YENKONZO) IYA KULEZWE NGEMISEBENZI EFANELE. YINI OKUYE MISSION - UNGAQINISISI.
Kodwa nguwe ophathisiwe ukukhomba nokuthuthukisa wonke amathalenta afihlekile namakhono omntanakho, okuzowudinga lapho efeza umsebenzi wakhe.
UMkhandlu wesibili :
- THOLA UMNTWANA WAKHO OKUTHI YINI.
Ungathanda yini indodakazi yakhe ukuba ihlanganyele eqenjini le-ballet, futhi liyamelana nayo? U-Sonny nobunzima ufunda ama-quatrains, kanti umakhelwane uVanya (Kolya, Petya) ufunda ngokuthi "Borodino" ngenhliziyo?
Kulungile, makube njalo!
Into eyinhloko ukuthi yiyo ingane yakho. Okuthandayo kakhulu, owokuzalwa kakhulu. Futhi uma kukhona okungamsebenzi kuye, khona-ke kuzovela okuhlukile. Futhi kuvela ukuthi wonke umuntu ozungezile uyoba nomona.
Futhi nakhu kungukuthi uqobo
- UNGAKHULU UKUKHOLWA KOKUKHOLWA KOMKHAYA.
Ngokuvamile ezingxoxweni zemfundo, abazali basebenzisa imishwana ehlela ngokoqobo umuntu okhulayo ukuba ahluleke. Lapha kukhona:
- Ingabe kunzima ukukhumbula ...
- Ngikutshele izikhathi eziyinkulungwane ...
- ufana no ...
- Ngishiye ngedwa, anginaso isikhathi ...
- uba ...
- kungani uLena (Katya, Vasya, njll) efana nalokhu, kodwa awukho ...
- ucabangani ...
- kufanele uphindwe kaningi kangakanani ... Uma ungajabuli nokuziphatha kwengane, bhekani uthi: "Angizange ngilindele (ukuthi) ukuthi ingane enjalo izokwenza isenzo esinjalo", "isenzo sakho sithukuthele kakhulu". Ngakho-ke, ulahla isenzo kuphela, futhi ingane, ngokusemandleni, izama ukulungisa ukuziphatha kwayo futhi ayisakucasuli. Futhi uzama ukukhuluma kaningi kumntwana wesikole esikoleni esiphakeme:
- Kuhle ukuthi nginakho!
- Ngiyakuthanda kakhulu ...
- ngaphandle kwakho bengingeke ngiphathe ...
- ngiyabonga ...
- ungumuntu omuhle kimi ... - ungumuntu wami ohlakaniphile (omuhle, njll)
Kodwa manje into eyinhloko akufanele iluvelele. Uma kungenjalo, ungakwazi ukunakekela umuntu okhulayo eyedwa "Mina", ukuthi uzovele ayeke ukuqaphela abanye! Esikhathini seminyaka yasenkulisa, lokhu ngeke kubonakale kakhulu (ekhaya, endaweni yakhe, uzobe enothando, enkulisa - ehlukile, kodwa epholile ngaphansi kobuqaphi bokufundisa komfundisi). Kodwa isikole sizoqala ukungqubuzana, futhi yini, ngoba ingane yakho isetshenziselwa konke okwenzekayo njengoba nje efuna!
Ukuze lokhu kungenzeki, nasi iseluleko sakho :
Ngenkathi yobumnene kakhulu, khuthaza ingane ukuthi ihloniphe imvelo. FUNDA UKUPHATHWA KWAKHO KWEBANYE, QAPHELA NGEZEKHAYA, UKUBHUBA. Futhi khumbula: isimo esithulile, esithokozile emndenini ungenye yezimiso eziyisisekelo zokuthuthukiswa okuhambisanayo kwengane yakho encane esikoleni.
Manje uyazi konke mayelana nezeluleko kubazali ekukhulisweni kwezingane zasesikoleni esiphakeme kanye nezincomo ezizosiza ukudala ubuhlobo obuvumelanayo phakathi kwabantwana nabazali. Noma yiziphi izinqubo eziqhubekayo ozisebenzisayo, konke kuyoba yize uma indlu yomzali ingenakho ukuthula nenduduzo yomndeni. Ukufunga, ukumemeza, abazali balahlekelwa igunya labo emehlweni omntwana, ozoba nzima kakhulu ukululama kamuva. Ngakho-ke, ukukuthanda, ukuthula nokufudumala, sithemba ukuthi uzothatha iseluleko kubazali!
Amaminithi emihlangano yabazali enkulisa
Indlela yokufundisa ingane ukwenza umsebenzi wesikole?
Ukuqeqeshwa umthwalo esikoleni
Indlela yokulondoloza impilo yengane esikoleni
Iholide likaMama e-enkulisa
Yini okufanele ngiyenze uma ingane yami ithola amamaki amabi?
Ingabe owesifazane angenza indoda ibe namandla?
Isinkwa nge-anyanisi neminqumo
Izimpawu ze-zodiac, ezilindele inhlanhla ngoNovemba 2017
Ungamsiza kanjani ingane ukukhetha umsebenzi?
Yini okufanele ngiyenze uma umyeni wami eshaya umkakhe?
Yini engingayipheka nge amajikijolo amaqhwa?